fanontaniana A330 Mega Pack
2 taona 2 volana lasa izay #232 by Numan28
Salama! No alaina ny A330-300-200 Package.
Saingy tsy misy VC eo amin'ny Turkish Airlines A330-300:
2 taona 2 volana lasa izay #233 by Dariussssss
Misy dikanteny roa ao amin'ny fonosana, ny iray dia atao amin'ny POSKY, fa ny iray tsy manana VC. Iray hafa atao amin'ny Thomas Ruth manana VC.
Tsy manahy, raha ny zavatra rehetra dia nametraka tsara, samy manana.
Teneno izahay raha misy olana hafa.
2 taona 2 volana lasa izay #235 by Numan28
Iza amin'izy ireo no POSKY dikan sy izay ny Thomat dikan Rota?
2 taona 2 volana lasa izay #238 by Dariussssss
Rehefa mandeha ny mifidy ny fiaramanidina, dia misy 3 mitete-midina lisitra, na ny karazan-tsakafo: mpanamboatra fiaramanidina, mpitory sy ny karazana fiaramanidina. Tsindrio eo amin'ny mpitory, hifidy Thomas Ruth. Aza matahotra raha mahita Thomas Ruth-Luis Quintero, fa ny toy izany.
2 taona 2 volana lasa izay #239 by Numan28
Moa tsy misy a330-300 na 200 amin'ny mpandeha seza sy VC?
2 taona 2 volana lasa izay #242 by Dariussssss
huh .... tsy misy tsipiriany momba izany, tena. Toy hoy izaho: A330 avy TR avy amin'ny VC, fa no manana trano fialan-tsasatray mpandeha, tena tsy fantatro. Manana nametraka fonosana ihany fa satria tsy miraharaha ny trano fialan-tsasatray aho dia tsy nitady azy.
2 taona 2 volana lasa izay #243 by Numan28
Saingy tsy misy A330-300 ny Thomas Rota misy ao amin'ny posky dikan, ary nilaza fa izy ireo tsy misy VC
2 taona 2 volana lasa izay #244 by Dariussssss
... Oh olona .....
OK, -give ahy aloha ny rohy ny fiaramanidina entana no alaina
Faharoa, no avy eto na toeran-kafa?
Fahatelo, no nametraka araka ny tokony?
Izany no iray aho: http: //www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/6/799
ary amin'izao fotoana izao, amin'ny FSX Manana TR A330-300 ka nihazakazaka. Noho izany, omeo anay bebe kokoa Info.
2 taona 2 volana lasa izay #245 by Gh0stRider203
Dariussssss nanoratra hoe: amin'izao fotoana izao, amin'ny FSX Manana TR A330-300 ka nihazakazaka. Noho izany, omeo anay bebe kokoa Info.
OK tsara, aho eo amin'ny enina ao amin'ny F-14, sidewinders voahidy tao anao satria ianao efa nilaza ny fahavalo lasibatra ..... nomena aho ny handeha-mialoha ny afo raha manao ratsy iray hetsika .....
2 taona 2 volana lasa izay #246 by Dariussssss
Inona no ratsy nataoko? Tena nanao izay vitako mba hanampiana avy eto. Raha hoy aho, na nanao zavatra tsy mety, Miala tsiny aho izany, fa ny tena tsy hieritreritra nataoko.
Fotoana mamorona pejy: 0.307 segondra